नयाँ विरासत निर्माणको कथा ⋆ JINDAGANI.COM
Home » नयाँ विरासत निर्माणको कथा
जेष्ठ ७, २०७८	0	By शकुन्तला जोशी
स्वाभाविक हो- नेपालमा व्यावसायिक घरानाको संख्या थोरै छ l त्यसमा पनि दोस्रो पुस्ता के गर्दैछ ? कस्तो बन्दैछ ? चासो स्वाभाविक हो l सरसर्ती हेर्दा व्यावसायिक घरानाका व्यवसाय पच्छ्याउनेमा छोरा हाबी छन् । यद्यपि, पछिल्लो समय केही छोरीले घरानियाँ व्यवसाय सम्हालिरहेका छन् ।
बुद्ध एयर प्रालिकी कार्यकारी अधिकृत आस्था बस्नेत व्यवसाय प्रबर्द्धनका लागि अहोरात्र खटिरहेकी छन् । ‘समाजको ठूलो हिस्सा छोरीलाई पुस्तेनी विरासतको प्रतिनिधि मान्न तयार छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘तर हाम्रो परिवारमा त्यो विभेद छैन ।’
जेठी छोरी आरजु बुटिक व्यवसायमा संलग्न छिन्, कान्छी छोरी आस्था वीरेन्द्रबहादुरको सपना पछ्याउँदै अघि बढेकी छिन् । व्यावसायिक वातावरणमा हुर्किएकी आस्थाले अन्य पेसा, व्यवसाय गर्ने सोचिनन् । यहीं व्यवसायलाई उचाइमा पु-याउने उनको धोको छ । यसैकारण उनी ‘एयरलाइन्स म्यानेजमेन्ट’मा एमबिए गर्ने तयारीमा छिन् ।
उनीझैं गोल्छा हाउसमा अघिल्लो पुस्ताका महिला पनि व्यवसायमा जोडिएका थिए । जसको उदाहरण हुन्–महेन्द्र-राज्यक्ष्मी गोल्छाकी छोरी युक्ति गोल्छा र सुरेन्द्र गोल्छाकी छोरी अनुज्ञा गोल्छा ।
लतिकाको विवाह नेपालको व्यावसायिक घरानामा भयो । उनी व्यवसायमा आउन चाहन्थिन् । उनले श्रीमान् र परिवारलाई मनाउन निकै मिहिनेत गर्नुप-यो । घरमा धेरै कामदार राखिएको थियो । बुहारीले घर बाहिर काममा जानुलाई राम्रो मानिँदैनथ्यो ।
२१ वर्षमा उनले आफ्नै अबिचुरी लेखिन् । बेलायतमा पढ्दा त्यो उनको कलेजको ‘प्रजेक्ट वर्क’ थियो । यसको उद्देश्य थियो– आफ्नो मृत्युपछि समाजले आफूलाई दिने स्थान र सम्मान जीवनकालमा गरिएको कर्ममा निर्भर हुन्छ । जसले मानिसलाई सकारात्मक र आमहितका लागि कर्म गर्न प्रेरित गर्छ ।
अम्बिका श्रेष्ठले ५२ वर्षअघि (सन् १९६८ तिरै) हालको होटल द्वारिकाज सञ्चालन गरेकी थिइन् ।
घरानियाँ व्यवसायको विरासतमा उदाएका यी महिला केही उदाहरण हुन् । अन्य परिवारमा पनि छोरी–बुहारी क्रमशः व्यवसायमा जोडिने क्रममा छन् । यो चित्रले भविष्यमा औद्योगिक क्षेत्रमा महिला नेतृत्वको पहुँच बढ्ने संकेत गर्छ ।